Tag: fahitana finday
Maninona no tsy mitovy ny fampiharana finday
Alarobia 30 Janoary 2013 Alakamisy 7 martsa 2013 Douglas Karr
Nisy fotoana iray izay naysayer momba ny rindranasa finday. Nieritreritra aho fa tsy maintsy niandry fotsiny isika mandra-pahatongan'ny HTML5 sy ny mpanamory finday eto dia hanjavona fotsiny ny fampiharana ireo lozisialy amin'ny birao. Nefa tsy nanao izany izy ireo. Ilay rindranay finday noforonin'ireo manam-pahaizana niainana mpampiasa tao Postano dia nanimba tanteraka ny fomba fahitako taloha. Ity ny statistika finday amin'ny alàlan'ny Webtrends. Jery ​​todika ny statistikan'ny fampiharana anay sy izy